Philips Standard sonic toothbrush heads HX9043/05 ~ ICT.com.mm
HomePhilips Standard sonic toothbrush heads HX9043/05
Philips Standard sonic toothbrush heads HX9043/05
4 x more surface contact* for an effortless deep clean Up to2x better for gums thanamanual brush 10x more plaque removal from hard-to-reach areas Engineered to maximize sonic... [Learn more]
လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကျန်းမာရေးမှာ အရေးကြီးဆုံးထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ခံတွင်းကျန်းမာရေးအတွက်အကောင်းဆုံး ထောက်ကူပေးမဲ့ Philips အမှတ်တံဆိပ် လျှပ်စစ်သွားပွတ်တံခေါင်း ဖြစ်ပါတယ်။ Philips Sonicare (click-on) သွားပွတ်တံလက်ကိုင်တိုင်းမှာ တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ AdaptiveClean သွားပွတ်တံထိပ်ပိုင်းက ခံတွင်းရဲ့ ဘယ်နေရာမှာမဆိုရှိတဲ့ သွားနဲ့သွားဖုံးကို ထိထိရောက်ရောက်သန့်ရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ပျော့ပြောင်းတဲ့ရာဘာနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ သွားပွတ်တံရဲ့ဘေးဘက်အပိုင်းတွေက သင့်ရဲ့ အပေါ်/အောက်/ဘယ်/ညာ စသဖြင့် မတူညီတဲ့သွားတွေရဲ့မျက်နှာပြင်တွေကို အလိုက်သင့် ပွတ်တိုက်သန့်ရှင်းပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သွားမျက်နှာပြင်တွေကိုလေးဆအထိ ပိုမိုထိတွေ့နိုင်ပြီး သွားနဲ့သွားဖုံးကြားမှာ ကပ်ငြိနေတဲ့ စားကြွင်းစားကျန်တွေနဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေကို ဆယ်ဆအထိ ပိုမိုရှင်းလင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ သွားဖုံးကို ထိခိုက်မှုမရှိစေပဲပုံမှန်သွားပွတ်တံရောက်ရှိဖို့ ခက်ခဲတဲ့ နေရာတွေအထိပါ သန့်ရှင်းပေးနိုင်ပြီး သာမန်သွားပွတ်တံအသုံးပြုမှုထက် နှစ်ဆပိုမိုထိရောက်ပါတယ်။ Philips Sonic သွားပွတ်တံရဲ့ မြင့်မားတဲ့နည်းပညာကတစ်မိနစ်လျှင် ဘရပ်ရှ်ပွတ်တိုက်မှုအကြိမ်ရေ 31,000 အထိ ပြုလုပ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီးသွားနဲ့သွားဖုံးကြားကို ငြင်သာစွာနဲ့ သန့်ရှင်းပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်သက်တာအာမခံပေးထားတာကြောင့် တစ်ခါဝယ်ယူပြီးတာနဲ့ တစ်သက်လုံး စိတ်ချလက်ချ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Our AdaptiveClean brush head is the onlyelectric toothbrush head that can follow the unique shape of your teeth and gums. With soft flexible sides made of rubber, the bristles of the brush head can adjust to the shape of each tooth's surface. You get up to 4x more surface contact and up to 10x more plaque removal along the gum line and between teeth. Even hard-to-reach areas getadeep clean that's still gentle on gums.
Philips Sonicare brush heads are vital to our core technology of high-frequency, highamplitude brush movements performing over 31,000 brush strokes per minute. Our unparalleled sonic technology fully extends the power from the handle all the way to the tip of the brush head. This sonic motion createsadynamic fluid action that drives fluid deep between teeth and along the gum line for superior, yet gentle, cleaning every time.